Palestina: Fiandrasana Doboka Tafondro Tao Gaza Amin’ny Andron’ny Iftar · Global Voices teny Malagasy
Palestina: Fiandrasana Doboka Tafondro Tao Gaza Amin'ny Andron'ny Iftar
Voadika ny 20 Mey 2017 6:45 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, বাংলা, English
Ny ady tao Gaza dia nahatonga ireo fombandrazana marobe ho lasa fahatsiarovana fahagola sisa. Mahatsiaro ny nifaranan'ny fomba fanao rehefa Ramadan i Hazem [ar] Palestiana bilaogera, izay tsaroan'ny raibeny efa lasa nodimandry.
Efa fomba mahazatra io ary hajain'ny maro any amin'ireo firenena Miozolmana maro , izay ny doboka tafondro no milaza ny (Iftar) fahataperan'ny fifadiankanina amin'ny mody masoandro, ary tsy apoaka intsony ao Gaza. Hoy izy manoratra :
Mbola resahan'ireo ray sy reninay ary ny raibe sy renibenay ny zavatra antsoina hoe tafondron'ny Iftar (fampitsaharana fifadiankanina), ary raha vao tonga ao an-tsain-dry zareo ny fahatsiarovana izany, dia iriandry zareo fatratra ny hiverenan'ny andro fahiny.
Manodidina ny Iftar, ireo andro “tsy manantsiny” no noresahan'ny raibeko, araka ny namaritan'io lahiantitra io azy ireny. Zendana aho tamin'ireo teniny sy ny fahamoran-tohina nananany, izay niainga avy hatrany avy any anaty fony lalina. Vonton-dranomaso mafaitra ny masony noho ireny andro ireny raha niteny hoe: O ry zafikeliko, raha mba afaka miverina mantsy ny tafondro rehefa Iftar, mety hitondra hasambarana ho an'ny isan-tokantrano sy isaky ny efitrano. Fahazaranay ny mifamory ao an-tranon'ny renibenareo, izahay rehetra, mipetraka manodidina ny fàtana, mankalaza ny alin'ny Ramadàny.
Momba ny fiainana tao Gaza nandritry ny Ramadan, tsaroan'ilay lahiantitra fa :
Hahita zavatra mahafinaritra isankarazany ianareo. Ho hitnareo eto ny Kunafa, vita avy amin'ny tavy voajanahary; ary ery ny qatayef, nosesehana amanda. Tanora ny dadatoanareo tamin'izany ary mety hahita fanala iray (fanoos) ianareo eto, dia kilalao iray etsy. Nazava daholo ny tety amin'ny mpiray vodirindrina.
Nahazatra anay ny nitsidika havana sy mpiara-monina, ary tsiky no eny amin'ny tavan'ny tsirairay. Nahazatra anay ny nijoro nandritry ny alina ary mifampizara tantara sy tsiambaratelo, momba ilay mpitaingina soavaly, ny liona ary ilay mpivenjivenjy iray.
Raha hiverina amin'ny vaninandro maoderina, mitaraina ilay raibe hoe:
O ry zafikeliko, raha mba afaka miverina mantsy ny tafondro rehefa Iftar,
Tsy no nisy ny mpifonja, tsy nisy fisamborana,
tsy nisy sàkana na fanjanahantany.
Tety amin'ny manididina antsika, nisidina avo ny sorabaventy,
Ary mety hihira ny tanora sy ny antitra.
Ao anatin'ny firenentsika, firenen'ny afaka,
raha mba afaka miverina mantsy ny tafondro rehefa Iftar.
Avy eo manohy i Hazem:
Tsy vitan'ny raibeko hatramin'ny farany akory ny tantrany, dia vonton-dranomaso ny masoko noho ny zavamisy feno herisetra – fiainana ambany fahirano sy faharavàna, miaraka amin'ireo havana rehetra sy mpiara-monina niparitaka any rehetra any, miady irery sy sahiran-tsaina. Norohako ny handrin'ny raibeko dia nivavaka tamin'i Allah aho mba hanangona anay mandritr ny Ramadàny ho ao anaty fahasalamana, hasambarana ary fitoniana.